Somaliland: Tababar Ku Saabsan Ururinta Xogta Qaxoontiga Dalka Ku Sugan Oo Hargaysa Lagu Qabtay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Tababar Ku Saabsan Ururinta Xogta Qaxoontiga Dalka Ku Sugan Oo Hargaysa...
Tababar ku saabsan sidii xog rasmi ah looga heli lahaa tiradda dadka qoxoontiga ah ee ku sugan Somaliland ayaa shalay lagu qabtay magaaladda Hargaysa.
Tababarkaasi oo socon donna muddo lix bilood ah, isla markaana ay soo qaban-qaabisay wasaaradda dib-u-dejinta Somaliland. Waxaana tababarkaasi ka qayb qaadanaya shaqaalaha wasaaraddaha shaqadda iyo arrimaha bulshadda, arrimaha gudaha, dib-u-dejinta iyo laanta socdaalka Somaliland.Waxaana furitaankii tababarkaas ka qayb galay wasiirrada Dib u dejinta, Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Taliyaha laanta Socdaalka iyo Agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha Dib u dejinta iyo Arrimaha Gudaha.
Wasiirka wasaaradda dib-u-dejinta Cali Siciid Raygal, oo hadal ka jeediyay furitaanka tababarkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay u jeedadda laga leeyahay tababarkaasi iyo waxyaabaha lagu baran doonno mudadda uu socdo.
Cali Siciid Raygal, oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waa sidii dadka inoo imanaya sharaftooda iyo karaamadooda aynu u sugi lahayn, oo si dhab ah aynu u ogaano dadka qaxoontiga ah ee dalkeenna Jooga iyo Waxa aynu ku qaabilnay iyo waxay yihiin. Taas darteed waxaa lagama maar-maan noqotay in dawladu xog ka hesho.
Markii la is-weydiiyeyna waxay noqotay in wasaaradaha dawlada ee arrintani khusayso, ee ka wada shaqeeyaa ay lama huraan tahay inay arrintii xog ka helaan. Tababarkani waxa uu socon doonaa Lix ilaa Todoba bilood, Waxaan rejaynayaa in aad noqon doontaan kuwo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca.”
Wasiirka Wasaaradda Dib u dejinta Mudane Cali Siciid Raygal oo Madashii tababarkaasi ka hadlay ayaa ka waramay tababarkani waxa uu yahay iyo ujeedada loo qabtay
Sidoo kale, waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Mudane Cali Maxamud Xasan (Cali –Sandule), waxaanu sheeegay in ay ka wasaarad ahaan soo dhawaynayaan tababarkan isla markaana balan qaaday in wixii kaga soo beegma wasaaarad ahaan inay fulin doonaan.
Taliyaha laanta socdaalka Somaliland Maxamed Cismaan Caalin, ayaa isna sheegay inay muhiim tahay in la ogaado tirada dadka qaxoontiga ah ee Ku sugan Somaliland si loo aqoonsado dadka xaqa u leh inay yihiin Qaxoonti.
Maxamed Cismaan Caalin, oo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Marka la eego dadka arrintani khusayso, laanta socdaalku kaalin mug leh ayay kaga Jirtaa. Wax badan inuu ka ogaado iyo xaqiiqda qofkaas la qeexayo in aan wax badan kala socono waa waajibaadka ay u xilsaaran tahay laanta socdaalka Somaliland, aqoonteedda iyo wixii mas’uuliyad ah ee Ka soo baxa waa mid aanu fulinayno.”
Sidoo kale waxaa iyagna halkaasi ka hadlay agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha dib u dejinta iyo Arrimaha gudaha oo tilmaamay in tababarkani uu faa’iido badan u leeyahay daneeyeyaasha arrimaha qoxoontiga.